မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: တီပီ မြန်မာ သင်္ကြန် ၂၀၀၉ ဒီဗွီဒီခွေ အမြည်း
Posted by mabaydar at 10:44 PM
ဗီဒီယို ၃ ခေါက်ကြည့်သွားတယ်
4/01/2009 11:32 PM
အခွေထွက်ရင် ဘယ်မှာဝယ်လို့ရလဲ အမ..
အင်း.. သတင်းကြားရင် ဒီမှာ တင်ပေးပါ့မယ်.. အမည်မသိ သယ်ရင်းရေ..
စိတ်ချ ။ ပြေးဝယ်ဦးမှာ ။ အခုကြည့်ရတာ ဆန့်တငံ့ငံ့နဲ့ ။ မြန်မာမလေးတွေ မြန်မာလိုကတာ ကြိုက်တယ် ။ Cheers !!!
where is that place? near china town?
when they celebrate that ? if i not wrong i think that hall is at china town.
anyway really thanks ma bay dar..:)
4/02/2009 12:18 PM
အမည်မသိ သယ်ရင်းရေ.. ဒီနှစ် တီပီ မြန်မာသင်္ကြန်ကို Temasek poly ရဲ့ Auditorium2မှာပဲ ကျင်းပခဲ့တာပါ.. ချိုင်းနားတောင်းမဟုတ်ပါ... ကျောင်းသင်္ကြန်ကို ကျောင်းမှာပဲ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်.. မတ်လ ၁၄ရက်နေ့ကပါ.. မကျင်းပခင်ကလဲ ဒီဘလော့မှာ ကြော်ငြာလေးတင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်...